घरेलु उपचार कति प्रभावकारी ? – Kantipur Press
तुलनात्मक रुपमा घरेलु उपचार धेरै सस्तो हुन्छ । सजिलो पनि । घरेलु उपचारले दीर्घकालिन प्रभाव पार्छ ।
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । एलोपेथिक जस्तो घरेलु उपचारको तुरुन्त प्रभाव देखिदैन । यसले बिस्तारै प्रभाव पार्ने हो । कतिपय अवस्थामा हामीलाई यसको मात्रा र प्रयोग विधी पनि थाहा हुँदैन ।
प्राकृतिक घरेलु उपचार यस्तो विधी हो, जो घरमा सजिलै उपलब्ध हुने बस्तुबाट तयार हुन्छ । जस्तो कि, अदुवा, लसुन, मसला, घिउकुमारी, तुलसी, प्याज, गोलेभडा, बेसार, नुन, मरिज, जडीबुटी आदि । यी यस्ता चिज हुन्, जो हाम्रो भान्सामा जहिले पनि उपलब्ध हुन्छ ।
घरेलु उपचारको आम विशेषता के भने, यसलाई सामान्य व्यक्तिले पनि उपयोग गर्न सक्छन् । यसकारण कुनै विशेषज्ञताको आवश्यकक्ता हुँदैन । यद्यपी यसलाई उचित तरिकारले वा उचित विधी अनुसार गर्न जान्ने हो भने त्यो थप प्रभावकारी हुन्छ ।
जटिल शारीरिक समस्यामा घरेलु उपचार विधीले तत्काल प्रभाव पार्दैन । यद्यपी दीर्घरोग लगायत कतिपय समस्यामा भने घरेलु उपचार राम्रो विकल्प हो । डन्डिफोर वा छालाको अन्य समस्या, दाद, केस झर्ने, यीस्ट संक्रमण, टाउको दुख्ने, पेटको समस्या, ज्वरो, कब्जियत, रुँघा, श्वास संक्रमण जस्ता समस्यामा घरेलु उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
यदि कुनैपनि रोगको उपचार गरिरहेको वा कुनै औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले घरेलु उपचार गर्दा चिकित्सकको परामर्श भने लिनुपर्छ ।
घरेलु उपचारले कसरी काम गर्छ ?
१. घरेलु उपचारले सुक्ष्म जीवलाई मार्छ वा त्यसको बृद्धिलाई रोक्छ ।
२. कति सूक्ष जीवलाई जीवित राख्नका लागि अनुकूल वातावरण बन्न दिदैन ।
३. प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । शरीरको सूक्ष्म जीवसँग लड्न सक्षम बनाउँछ ।
घरेलु उपचारको फाइदा
अहिले घरेलु उपचार विधीबारे सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ ।
-घरेलु उपचारको प्रयोग गर्नु वा तयार गर्नु सरल छ । कुनै विशेषज्ञताको आवश्यक्ता हुँदैन । जो कोहिले यसलाई तयार गर्न सक्छन् ।
– घरेलु उपचारको दुष्प्रभाव कम हुन्छ ।
-घरेलु उपचारमा यस्तो कुनै रसायन हुँदैन, जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ ।
– घरेलु उपचार सस्तो र सजिलै मिल्छ ।
-कतिपय रोगमा घरेलु उपचार अधिक प्रभावकारी हुन्छ ।
-एकै घरेलु उपचारले कति प्रकारका उपचार गर्छ ।